जी फाउण्डेसनले भोजपुरमा भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय भवन निर्माण गर्यो - Sagarmatha Online News Portal
भोजपुर । जिल्लाको साल्पा शिलिछो गाउपालिका वडा नं. ६ थुम्लुङमा रहेको आईतबारे आधारभुत विद्यालयको भूकम्प प्रतिरोधी २ कोठे भवन पुनः निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
एक अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था जी फाउण्डेशनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग एवं पहाडी विकास तथा संरक्षण समूह नेपालको साझेदारीता २ कोठे भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गरिएको हो ।
नव निर्मित भवनको सार्वजनिक सुनुवाई तथा हस्तान्तरण साल्पा शिलिछो गाउपालिका अध्यक्ष महेश राईको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो । विद्यालयको पुनः निर्माणका लागि पहाडी विकास तथा संरक्षण समूह नेपालको तर्फबाट २४ लाख ८६ हजार १३ रुपैया र स्थानीय जनसमुदायको तर्फबाट ३ लाख २५ हजार ८ सय २० रुपैया बराबरको जनश्रमदान गरी जम्मा २८ लाख ११ हजार ८ सय ३३ रुपैया बराबरको लगानीमा विद्यालय भवन निर्माणको काम सकिएको हो ।
विद्यालय भवनसँगै आवश्यक बालमैत्री खानेपानी समेत संस्थाको सहयोगमा निर्माण गरिएको छ । विद्यालय भवन र खानेपानी गाउपालिका अध्यक्ष राई र पहाडी विकास तथा संरक्षण समूह नेपाल भोजपुर समितिका सहसंयोजक वीरकुमार राईले संयुक्त रुपमा हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यक्रम गाउपालिका वडा नंं ६ का वडाध्यक्ष विक्रम वन सन्यासी, जी फाउण्डेशनका प्रतिनिधीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
यसैबीच जी फाउण्डेशनकै आर्थिक सहयोगमा साल्पा शिलिछो गाउपालिका वडा नं. ५ मातेलमा एक घर एक खानेपानी धारा निर्माण कार्य पनि सम्पन्न भएको छ । साझेदारी संस्था पहाडी विकास तथा संरक्षण समूह नेपालको तर्फबाट ५१ लाख ४५ हजार ६ सय २२ रुपैया बजेट लागतमा उत्त आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थियो । स्थानीय जनसमुदायको तर्फबाट १८ लाख ६ हजार ३ सय १० रुपैया बराबरको जनश्रमदान गरी जम्मा ६९ लाख ५१ हजार ९ सय ३२ रुपैया बराबरको लागतमा मातेलमा १ सय १५ खानेपानी धारा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । उक्त खानेपानी निर्माण परियोजना सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक लेखापरिक्षण तथा उद्घाटन कार्यक्रम गाउपालिका अध्यक्ष महेश राईको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो ।